Midowga Yurub oo aan Wax Mucaawino ah Siin Doonin DFKMG ilaa Madaxdeedu Heshiiyaan::
$100 Malyan oo Doolar oo loo qorsheeyey Dib-u Dhiska Soomaaliya oo u Xanibay Heshiis La'aanta Hoggaamiyaasha Soomaaliyeed...
".....Waxa keliya oo aan weydiisaneynaa dawlada Soomaaliya waa in ay ayagu marka hore gurogooda nidaamiyaan ka hor inta aan lacagta la siin..." EU
"Waxaan maalmahan wadnaa kulamo wada xaajood qaran ah, wax yar ayaana ka dhiman xallainta faraqa firkadaha ee u dhexeeya hogaamiayasha la doortay (DFKMG)." Geedi
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi (Bidix) oo dhegeysanaya David Bell, oo ah xoghaya koowaad ee dawlada UK hay'adeeda caalamiga ah ee horumarinta u qaabilsan Soomaaliya, ayagoo joogey Nairobi | Sawirka: Standard | 30/8/2005
(Tarjumadii: SomaliTalk.com | Nairobi | Aug 31, 2005): Soomaaliya ma heli doonto wax mucaawino ah oo degdeg ah ilaa ay madaxda DFKMG ah ay dhameeyaan khilaafaadka dhexdooda ku jira, sidaas waxaa maanta (Arbaca 31) werisey jaridada Standard ee kasoo baxda magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Diblomaasiyiin ka tirsan Midowga Yurub ayaa digniin ka bixiyey muranka u dhexeeya DFKMG, murankaas oo cabsi geliyey in ay deeq-bixiyayaashu u fasaxaan deeqdii loogu talo galay dib u dhiska Soomaaliya, taas oo DFKMG loo ballan qaaday markii lagu doortay Nairobi bishii October ee sanadkii 2004 (toban bilood ka hor).
"Dhammaan deeq-bixiyayaashu waxay leeyihiin shuruud hor dhac u ah deeqda ay siinayaan dawladaha. Waxa keliya oo aan weydiisaneynaa dawlada Soomaaliya waa in ay ayagu marka hore gurogooda nidaamiyaan ka hor inta aan lacagta la siin" sidaas waxaa yiri David Bell oo ah xoghayaha koowaad ee horumarinta Soomaaliya u qaabilsan dawlada Britain laanteeda caalamiga ah ee dib u dhiska ee loo yaqaan DFID.
David Bell oo u hadlay dublamaasiyiinta, oo ay soo xigatey jariidada Standard, waxa uu yiri: waa in la qoondeeyaa qaab dhismeedka madaniga ah oo leh xeer iyo hab maamuus loo sheego shaqaalaha waxa laga filayo - shaqaalaha mashaariicda/hay'adaha dib u dhiska.
"Dhammaan lacagta ay bixiyaan deeq-bixiyayaashu waxaa shardi ah in loo isticmaalo sida loo qoondeeyey, lana xaqiijiyo in la iskula xisaabtamo" ayuu yiri David Bell.
Digniintaas waxaa shalay lagu bixiyey xafiiska Soomaalidu ay ku leedahay Nairobi markii ay xubnaha ka socda Midowga Yurub ay halkaas kula kulmeen ra'iisul wasaraha DFKMG, Cali Maxamed Geedi.
Mr. Bell waxa uu sheegay in Midowga Yurub ay Soomaaliya u qoon deeyeen $100 million oo loogu talo galay fulinta hawlaha ijtimaaciga ah. Kordhinta lacagtaasina waxay ku xiran tahay sida uu noqdo ammaanka dalku.
Geeddi oo diblamasiyiinta uga xog waramay arrimaha Soomaaliya waxa uu u xaqiijiyin in la wado agaasimid wada xaajood qaran.
"Waxaan maalmahan wadnaa kulamo wada xaajood qaran ah, wax yar ayaana ka dhiman xallainta faraqa firkadaha ee u dhexeeya hogaamiyasha la doortay (DFKMG)." ayuu yiri Geedi.
Geedi waxa uu beeniyey faraqa kooxaysiga ah ee ku dhex jira dawlada, asagoo dhehaya waxa la arkayaa waa kala duwanaanta fikradaha.
Waxana uu Geedi yiri "Meelna kagama qorna Baybalka ama Quraanka in aan walaalaha qoysku ay had iyo jeer hal fikrad ka qabaan arrin. Anaga oo Soomaali ahna arrintaas gaar kama nihin. Si aad ah ayaan u shaqayneynaa si aan u xallino kala duwanaanshaha".
Cali M. Geedi Waxa uusan wax weyn kasoo qaadin hadalada kulkulul ee dhex maray isaga, madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo Afhayeenka Baarlamaanka, Shariif Xasan Sh. Aden ee ku saabsan meesha la dejinayo dawlada.
Geedi waxa uu soo dhoweeyey madaxweyna-nimada UK ee Midowga Yurub, waxana uu sheegay in uu rajeynayo in caawinaad dheeraad ah ay imaan doonto maadaama Britain ay saaxiib adag la ahayd Soomaaliya.
Jariidada oo warkeedii sii wadata waxay tiri: Ilaa dabayaaqadii bishii May oo ahayd markii ay Nairobi ka guurtey, dawlada Yuusuf waxay ka hawl geleysey Jawhar, oo ah magaalo yar oo woqooyi ka xigta Muqdisho. Waa sida warku u dhigaye.
Afhayeenka Baarlamaanka iyo qayb Xildhibaano iyo golaha wasiirada ah ayaa ku adkaysanaya Muqdisho.
Geedi waxa uu ku dooday xataa in Jawhar "ay tahay qayb kamid ah Soomaaliya halkaas oo dawlada ay u xuquuq u leedahay in ay ka hawl gasho."
Tarjumadii: SomaliTalk.com | Nairobi | ISHA: Standard | Aug 31, 2005
Qaraabada Bad-maaxiinta Reer Kenya ee Lagu Af-Duubay Soomaaliya oo Dalbaday in Dadkooda loo soo daayo....
WFP waxay markabka lagu haysto aagga Xarardheere ka kiraysatay shirkada Motaku (Shipping Agency) ee Mombasa, Kenya. Shaqaalaha markabu waxay ka kooban yihiin: Naakhuudaha (dareewalka markabka) oo u dhashay reer Sri Lanka, Injineer reer Tansaniya ah iyo sidddex baxri ah oo reer Kenya ah.
Waa markii ugu horeysey ee taariikhda hay'adda WFP laga afduubo markab cunto mucaawino ah sida, sida ay werisey hay'adda degaanka.
Fatma Seif (Bidix) iyo Fatma Zabibu iyo qaraabada dadkooda lagu afduubay Soomaaliya | Sawirka: Reuters | Aug 30, 2005
Markabka lagu afduubay Xarardheere | Sawirka: WFP
(Tarjumadii SomaliTalk.com | Aug 30, 2005): Ehelada iyo qaraamada bad-maaxayaasha (bax-rida) lagu af-duubay Soomaaliya ayaa maanta, Aug 30, isugu soo baxay xarunta shirkadda Motaku (Shipping Agency) ee Mombasa, Kenya. Shirkadaas oo ah tan ay hay'adda WFP ka kiraysatay markabka hadda lagu haysto aagga Xarardheere, Soomaaliya. Waxayna qaraabadaasi shirkada ka dalbadeen in ay u cadayn ka bixiso in ay samaysay isku day sidii dadkooda af-duubka loou haysto Soomaaliya loo soo deyn lahaa.
Sawirada ay faafiyeen hay'adaha wararka ee jooga Mombasa ayaa muujinayey Fatma Seif (sawirka sare: Bidix) iyo Fatma Zabibu oo ah labo xaas oo nimankoodu ay kamid yihiin Siddeed bad-maax oo reer Kenya ah oo ay dabley Soomaaliyeed ku haystaan gudaha Soomaaliya - Labadaas haweenka ah oo Allah ku baryaaya meel u dhow xarunta shirkadda Marakiibta ee Mombaasa (Motaku), halkaas oo qaraabadii dadkaas afduubka lagu haysto ay ku dhigeen mudaharaad ay ku weydiisanayaan in eheladooda loo soo daayo.
Markabka lagu haysto agga Xarardheere waxaa wadey Sideed baxri ah oo u dhashay Reer kenya, nin Injineer ah oo reer Tanzania ah iyo Naakhudaha markabka oo reer Sri Lanka ah, waxaana raggaas iyo markabkooda la afduubay lixdan iyo afar (64) maalmood ka hor. Markabkaas oo lagu magacaabo MV Semlow markii la afduubay waxa uu sidey raashin mucaawino ah oo uu ka qaaday dekeda Mambasa asagoo kusii jeeday meelihii ay aafadii bad-gariirku wax yeeshay ee ku yaal xeebaha Woqooyi Bari ee Soomaaliya. Mucaawinadaas oo dhan 850 ton oo ay ku deeqeen dalalka Japan iyo Germany.
Waxaa wararku sheegeen in dhex-dhexaadiyaashii isku deyey in ay markabka soo daayaan ay ku guul daraysteen, kaddib markii ay afduubayaashu dalbadeen in la siiyo lacag dhan nus-malyuun oo doolar ($500,000), oo u dhiganta soddon-iyo-afar malyan oo shillinka kenya ah ah (KES 34 million).
Markabka MV Semlow oo ka diiwaan gashan St. Vincent & Grenadines, waxaa June 27, 2005i laga afduubay meel u dhexeysa Xarardheere iyo Hobyo oo qiyaastii 300km (200miles) Woqooyi Bari ka xigta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Markaas oo uu markabku mareyey meel xeebta u jirta 60km (40miles) asagoo kusii jeedey dekeda Boosaaso, Woqooyi Bari, Soomaaliya.
DFKMG oo isu dayday in ay arrinta dhex-dhexaadinteeda ka qayb qaadato waxay u muuqataa in aysan arrinta waxba ka qaban karin.
Waa markii ugu horeysey ee taariikhda hay'adda WFP laga afduubo markab cunto mucaawino ah sida, sida ay werisey hay'adda degaanka - warbxintas hoos ka akhri.
Tarjumadii: SomaliTalk.com | Aug 30, 2005 | Isha: Yahoo News/Reuters
Faahfaahin ku saabsan Afduubka iyo wararkii hore ee markabka hoos ka akhri::::
Markab Mucaawino sida oo la afduubay, Qaramada Midoobey oo Mucaawinadii ka joojisey Soomaaliya
Nairobi, Kenya, July 7, 2005 (Tarjumadii SomaliTalk.com) - Hay'adda Qaramada Midoobey u qaabilsan cuntada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WFP ayaa joojisey dhammaan shixnadihii mucaawinada ee ay gaarsiinjirtey dalka Soomaaliya kaddib markii la afduubay markab hay'addaas u kiraysnaa. Markabka oo ay hadda haystaan burcadda-badda waxa uu sidey cunto deeq mucaawino ah oo uu u sidey 28,000 oo qof oo ka badbaadey bad-gariirkii Tsunami ee December sannadkii hore. Cuntadaas oo loogu talo galay in dadkaas tabaalaysan lagu quudiyo muddo labo bilood ah.
Tani waa markii ugu horeysey ee taariikhda hay'adda WFP laga afduubo markab cunto mucaawino ah sida, sida ay werisey hay'adda degaanka.
Go'aanka lagu gaarey in shixnadaha mucaawinada laga joojiyo Soomaaliya waxaa sababay amaan darrida ka jirta biyaha Soomaaliya ee ku xeeran Afrika xeebteeda Bari, sidaas waxaa yiri agaasimaha WFP u qaabilsan Soomaaliya, Robert Hauser. Waxana uu intaaas ku daray "Haddii la helo xal degdeg ah, waxaan rajeyneynaa in aan kala go' weyn ku dhici doonin hawlgalada mucaawinada WFP ee wadanka Soomaaliya".
"Tobanka qof ee shaqaalaha ka ah markabka ayaa lagu soo waramay in xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay, waxana rajeyneynaa markabka MV Semlow ee sida mucaawinada in si shuruud la'aan ah loogu ogolaado in uu sii wato safarkiisii uu ugu socdey Boosaaso oo kutaal Woqooyi Bari ee dalka." ayuu yiri Mr. Hauser oo kusii daray "Soomaaliya waa meel ay ka jirto halis weyn oo sababeysa in aan shixnad kale loo diri karin."
Hay'adda Qaramada Midoobey (UN) waxa ay hadda wada hadal ugu jirtaa sidii loo siideyn lahaa markabka, iyo shixnada saaran iyo shaqaalihiisa.
Siideynta shixnada mucaawinada ah, markabka iyo shaqaalihiisa ayey ku xirnaan doontaa in WFP ay dib u eegto go'aanka joojinta shixnadaha mucaawinada ee loo diro Soomaaliya.
Markabka MV Semlow oo ka diiwaan gashan St. Vincent iyo Grenadines, waxaa June 27keedii laga afduubay meel u dhexeysa Xarardheere iyo Hobyo oo qiyaastii 300km (200miles) Woqooyi Bari ka xigta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Markaas oo uu markabku mareyey meel xeebta u jirta 60km (40miles).
Qiyaastii 12 ilaa 15 markab oo u kiraysan WFP ayaa bil kasta yimaada dekeda Mombasa Kenya halkaas oo ay keenaan shixnado cunto deeq ah oo lo wado Soomaaliya iyo lix wadan oo oo kale oo ka tirsan gobolka. (Sawirka WFP)
WFP waxay markabka ka kiraysatay shirkada Motaka (Shipping Agency) ee Mombasa, Kenya. Shaqaalaha markabu waxay ka kooban yihiin: Naakhuudaha (dareewalka markabka) oo u dhashay reer Sri Lanka, Injineer reer Tansaniya ah iyo siddeed shaqaale ah oo reer Kenya ah.
WFP waxay xiriir la samaysay caqilada beelaha (aagaasaas) iyo maamulka maxalliga iyo cuqaasha la xushmeeyo ayadoo weydiisatey in ay ka caawiyaan sidii loo xaqiijin lahaa siideynta shixnadaas.
Wafti kasocda Dawladda Federaalka Kumeel gaark ah (DFKMG) ee Soomaaliya ayaa isniintii hore u safray degmada Xarardheere si ay uga qayb qaataan siideynta cunatada mucaawinada ah ee WFP, markabka iyo shaqaalihiisa.
Waftiga DFKMG waxaa hoggaaminayey Xirsi Aaden Rooble oo ah wasiir-ku-xigeenka gaadiidka Badda, oo uu weheliyo wasiiru dawlaha arimaha dibada Ibraahim Jeebe oo ay la socdaan caaqilo magac ku leh jaaliyada (ku dhaqan aaggaas).
WFP sida caadiga ah waxay shixnado mucaawino ka qaadaa Mombasa, Kenya ayadoo geyneysa goobo kala duwan oo ka tisan Soomaaliy. Ilaa bishii Janaayo waxay WFP Soomaaliya u qaaday 22,000 tons oo cunto mucaawino ah oo laga raray Mombasa.
Intii u dheseysey April iyo May, WFP waxay 2,000 tons oo deeq cunto ah gaarsiisey Xaradheere iyo degmooyinka ku xeeran ee ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Koonfurta Mudug, ayadoo mucaawinadaas la sii mariyey hay'adda CARE international.
Markabka MV Semlow waxa uu dekeda Mombasa, Kenya ka dhoofay June 23keedii asagoo kusii jeedey dekeda magaalada Boosdaaso oo ka tirsan Puntland. Markabka waxa uu sidey 850 tons oo bariis ah oo ay dalalka japan iyo Jarmalku ugu deeqeen barnaamijkii gargaarka ee WFP kaga jawaabeysey badgariirkii Tsunami.
Bad-gariirkii Tsunami waxay ahayd dhibaato kale oo ku dhacday dadka markii horeba saboolka ahaa, waxayna tabar daraysay dadka Puntland, Soomaaliya. Gobolka waxaa waxaa isaga dambeeyey afar sano oo abaar ah oo ay ku xigtey duufaan wadata daada iyo dhaxan daran." Sawirka WFP.
Soomaaliya waxay ahayd dalkii Afrika ee ay saamaynta ugu weyn ku yeelatay aafadii badgariirka Tsunami ee ay sababtay dhulgariirkii baaxadiisu dhamayd 9.0 ee ka dhacay badda jasiirada Sumatra ee dalka Indonesia markey taariikhdu ahayd December 26, 2004.
Meelaha uu bad-gariirku aadka u aafeeyey waxaa ka mid ah qaybo ka tirsan dawlad goboleedka Puntland oo ku taal woqooyi bari ee dalka Soomaaliya. Dadka halkaas ku dhaqan ayaan markabka la afduubay uu cuntada u sidey, ayey tiri WFP.
Afar sano oo xiriir ah oo roobku aad u yaraaday ayaa dooxada Sool iyo nawaaxigeeda Somaliland iyo Puntland waxay sabab u noqotay xoola badan oo ku le'day, xoolo dhaqatadii oo noqday cayr, arimahaas oo kordhiyey u nuglaanta dhibaatada iyo barakac.
"Waxaan ilaa hadda ognahay in Puntland ay ahayd meesha dhibaatada ugu weyn ay soo gaartey" sidaas waxaa yiri xubin ka tirsan UNICEF Somalia, Jesper Morch, waxa uu hadalkaas yiri wax yar kaddib markii badgariirkii Tsunami dhacday, waxana uu intaas ku daray "Arrintani waxa ay dhacday markii Puntland ay ku habsadeen abaar dheer, sidaas daraadeedna loo baahan yahay mucaawino badan si qoysaskaasi ay uga badbaadaan dhibtaadana ugana soo kabtaan".
Xaqiiqsiga baaxada dhibaatada waa adagtahay sabatoo ah xeebta aadka u dheer ee Soomaaliya iyo tuulooyin farabadan oo ku yaal meelo fogfog aan la gaari karin. Si kastaba ha ahaatee arrinta la garwaaqsaday wax yar kaddib Tsunami waxay ahayd sidii looga hor tegi lahaa cudurada ka dhasha biyahay iyo sidii dadkaas loo gaarsiin lahaa cuntada asaasiga ah iyo hoy ama gabbaad.
Warbixinadii Janaayo waxay muujiyeen in dadku ka cabanayeen biyo wasakhaysan iyo in dadka qaar ay la halgamayeen sidii ay ku heli lahaayeen cunto.
Nuurto Muudey oo 27-jir ah waxaa masiibadaas kaga dhintay ninkeedii iyo ilmo yar. Hadda waa in ay ayada keligeed ay quudisaa saddex carruurteeda ah. "Ma haysto wax aan carruurta ku quudiyo" ayey tiri. "Biyihii ayaa qaaday dhammaan waxaan haysaney. Mustqabal fiican uma jeedo. Waxaan ku tiirsanahay deeqda cuntada ee mucaawanada ah ee aan ka helo WFP. Waxaan la noolahay qoys kale. Xataa ma haysano hoy." ayey tiri Nuurto.
WFP waxay caawisaa 275,000 oo Soomaali ah oo ay siiso 2,000 tonns oo cunto ah bil kasta. Waxaa hadda hay'adda dalka Soomaaliya u yaal cunto ay qabin karto labo bilood. Laakiin warbixintaas oo ahayd July 7 waxaa ka dambeysey in maanta July 13 uu Mr. Hauser sheegay in WFP ay dalka ugu hartay cunto dhan 4,000 tonnes kuwaas oo ku dhammaanaya laba toddobaad haddii aan afduubkani dhammaan oo aan aggaa afduubka la tegin.
Akhri Aafadii badgariirka:::
ISHA: Environmental News & China News
Faafin: July 13, 2005
Markabkii Mucaawinada Sidey oo Weli ay Maleesiyo Ku Haystaan Aagga Xarardheere..
Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa tibaaxay in ilaa maanta oo ay taariikhdu tahay August 9 aan la siideyn markabkii ay dableydu ku haysteen aggaa Xarardheere.
Markabkaas oo u kiraysnaa hay'adda WFP waxa ilaa hadda afduub ahaan loogu haystaa toban shaqaale ah iyo shixnadii uu markabku sidey oo ah mucaawino loo sidey dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartey masiibadii badgariirka ee ku dhaqan aagga xeebaha Woqooyi Bari ee Soomaaliya.
Markabka waxaa la filayey in uu shalay u dhaqaaqo dhanka dekeda Ceel-Macaan, laakiin nin u hadlayey shirkada markabka leh oo ku sugan Kenya waxa uu yiri dadka markabka afduubtay waxay ka soo jawaabi la'yihiin raadiyihii lagula xiriiray.
Markii hore dadka afduubashaash aah waxay sheegteen in la siiyo nus-malyuun doolar, markii dambena waxay yiraahdeen waxaan qaadaneynaa 850 ton ee mucawinada ah oo uu markabku sido, mucaawinadaas oo ay dadkii ku tabaaloobey masiibadii Tsunami ay ugu deeqeen dalalka Japan iyo Germany.
Dhamaadkii toddobaadkii hore ayey ahayd markii Hay�adda WFP ay sheegtay in ay heshiis l agashay odayaal Soomaaliyeed si loo siiyaayo markabkaas. Waxayna hay'adu sheegtay in saddex beri lagu siideyn doono markabka, mark aay hadalkaas sheegtayna uu ahaa Jimcadii, taas oo sida lagasoo werinayo shirkada leh markabka aan siideyntii weli qabsoomin.
Waxaa markabkan xeebta u dhow Xarardheere laga afduubay June 27.
July 13 ayey ahayd markii hay'adda WFP ay 48 saacadod u qabatay in markabka lagu sii daayo.. [Hoos ka akhri warkaas]
Faafin: SomaliTalk.com | August 9, 2005
WFP oo 48 Saacadood u Qabatay in lagu Siidaayo Markabka Lagu Afduubay Xarardheere, isla mar ahaantaasna DFKMG ku eedaysay wax ka qabansho la'aanta Afduubkaas...
Markabka oo lagu magcaabo MV Semlow waxaa 27 June lagu afduubay aagga Xarardheere oo 300 km Woqooyi Bari ka xigta Muqdisho, asagoo kusii jeedey dekeda Boosaaso si cuntadaas loo gaarsiiyo dadkii dhibaatadu ka soo gaartey abaaraha iyo Tsumani (badgariirkii), waana markabkii ugu horeeyeye taariikhda WFP oo asagoo mucaawino sida la afduubo....
Markabka waxa uu sidey 850 tons oo bariis ah oo ay dalalka japan iyo Jarmalku ugu deeqeen barnaamijkii gargaarka ee WFP kaga jawaabeysey badgariirkii Tsunami.
Shaqaalaha markabu waxay ka kooban yihiin: Naakhuudahada (dareewalka markabka) oo u dhashay reer Sri Lanka, Injineer reer Tansaniya ah iyo siddeed shaqaale ah oo reer Kenya ah.
gabar codsatay codsatay in aan magaceeda la sheegin ayaa waxay noo sheegtay in bishii November iyo December in ayadu ay beeratay daroogada waxaana iiga soogay ayay tiri sided kiish oo daroogo ah waxayna noo sheegtay in aysan jirin wax koontoroola beerahooda ayna jiraan rag had iyo jeer u taagan iney beeraan daroogadaas, ayadoo weliba qaarkood ay u wareegeen dhinaca degmada janaale ayagoo halkaa ka wada hawlo ay ku hormarinayaan daroogada... Guji...
Mukhaadaraadka Lagu Beero Dhul-Beeraadka Soomaaliya
NAIROBI, July 13, 2005 - Hay'adda Qaramada Midoobey u qaabilsan cuntada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WFP ayaa mar kale talaadadii dalbatay in markabka lagu afdubay aagga Xaradheere lagu sii daayo si degdeg ah shuruud la'aan. Markabkaas oo dadkii ka badbaadey Badgariirkii Tsunami u siday cunto dhan 28,000 tons.
WFP waxay dalbatay in markabka lagu siidaayo muddo 48 saacadood gudeheed ah, haddii aan waqtigaas lagu siideyn waxa ay WFP shaaca ka qaaday in ay gebi ahaanba mucaawinada ka goyn doonto Koonfurta Mudug, waaa sida warku u dhigaye, halkaas oo sida ay hay'addu sheegtay ay mucaawinada WFP ku tiirsan yihiin dad tiradoodu dhan tahay 34,000 oo deggan aagga Koonfurta Mudug sida uu shaaca ka qaaday madaxa WFP ee Soomaaliya Robert Hauser.
Mr. Hauser oo arrintaas ka hadlayay waxa uu yiri "Haddii ay markabka sii daayaan si shuruud la'aan ah oo degdeg ah, markaas waxaan u sii wadi doonaa deeqda aan gaarsiineyno aagooda sidii caadiga ahayd. Lakiin haddii aan markabka, shixnada saaran iyo shaqaalaha lagu siideyn 48 saacadood gudohood, markaas WFP waxay aggaas ka dhigeysaa liiska madow." "Waxaan baaq u direynaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo DFKMG in ay laba-laabaan isku daygooda sidii markabkaas loo sii deyn lahaa" ayuu yiri Hauser.
Waxaa warku intaas ku daray in uu jiro wadahadal u socda saraakiil ka tirsan Dawlada FKMG iyo afduubayaasha, laakiin Hauser waxa uu DFKMG ku eedeeyey in aysan wax badan arrintaas ka qaban. Asagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri "Waxaa dhib weyn iga haystaa in aan fahmo waxay tahay ayadoo adduunka oo dhammi uu ku dadaalayo sidii uu Soomaaliya u caawin lahaa in ay noqoto wadan wanaagsan, haddana in DFKMG ay ka qabatay wax aad iyo aad u yar ama waxba dhamaynta afduubka (markabka) iyo ka hor tegid in ay dhacdo arrin taas la mid ah."
Warar laga soo xigtey warbaahinmta kenya ayaa tibaaxay in wadahadal uu u socdo Wasiiru dawlaha arrimaha Dibada DFKMG, Ibrahim Jeebe iyo Wasiir ku xigeenka gaadiidka Badda Hirsi Aden Roble oo wada jira iyo afduubayaasha oo dhanka kale ah.
Warsame Saciid oo ka tirsan WFP waxa uu rajo ka mujiyey kulankii ay maalinimadii Axada yeesheen Afduubayaasha markabka iyo wasiirada DFKMG, madaxda aaggaas iyo caaqilada degaanka."
Warsame oo hadalkiisii sii wata waxa uu yiri "waxa aan rabnaa waa markabka, shixnada saaran iyo shaqaalaha in dhaqso loo sii daayo oo uu gaaro 28,000 qof ee ka badbaadey Tsunami oo ku sugan aagga Boosaaso".
Markab Talyaani ah oo Lagu Weeraray Badda Cas Meel Soomaaliya u Dhow.
Wararka ka imanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegtay in markab laga leeyahay dalka Talyaaniga maanta lagu weeraray meel xeebta Soomaaliya u jirta 85 Miles o ah dhanka Badda Cas. Markabka oo lagu magcaabo "Cielo di Milano" oo dhererkiisu dhanyahay 174 miter, waxa uu siday 24000 tonnes oo xamuul ah iyo 24 qof oo shaqaalaha markabka ah. Waxa warku intaas ku daray in laba doonyood oo soo weeraray uu markabkaasi iskaga celiyey aalada dab-damiska ee markabka.
Bishan July 20keedii ayey ahad markii sidoo kale la sheegay in u dhacay isku day weerar markab kale oo magaciisa la yiraahdo "Jolly Marrone" oo markaaa marayey badda cas meel Soomaaliya u jirta 125 miles.
Wararka kale ee ka imanaya markabka lagu haysto aagga magaalada Xarardheere ayaa sheegaya in dableyda markabkaas haysta aysan rabin madax-furasho balse ay rabaan shixnadda Markabka saaran, shixnadaas oo ah cunto loo wadey dadka ku waxyeeloobey dhibaatadii Bad-gariirka ee ka dhacday xeebaha Soomaaliya. Warar kale ayaa sheegaya in dableyda markabka haysta ay sheegeen in ay siideyn doonaan siddeed qof ee u dhashay dalka Kenya ee shaqaalaha ka ah Markabka.
Faafin: July 26, 2005